Kooxda Tottenham Oo Si Naxariis Darro Ah Usoo Xasuuqday Watford Xilli Harry Kane Iyo Delle Ali Min Laba Gool Ku Baashaaleen – Kooxda.com
Home 2017 January Ingiriiska, Uncategorized, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Kooxda Tottenham Oo Si Naxariis Darro Ah Usoo Xasuuqday Watford Xilli Harry Kane Iyo Delle Ali Min Laba Gool Ku Baashaaleen
Kooxda Tottenham Oo Si Naxariis Darro Ah Usoo Xasuuqday Watford Xilli Harry Kane Iyo Delle Ali Min Laba Gool Ku Baashaaleen
January 1, 2017 · by	Mustafa Atam · 0
Kulan Ka tirsanaa horyaalka ingiriiska oo u dhexeeyay kooxaha Tottenham igo Watford ayaa kusoo idlaaday gegada Vicarage Road Stadium.
Kooxda Tottenham ayaa hilfaha u qaaday dhigeeda Watford xilli shan gool oo darandoori ah ah ku xasuuqeen wiilasha martida loo ahaa. Goolasha watford lagu kala dhantaalay waxaa kala qeybsaday Harry Kane iyo Delle Ali oo min labo gool ku casheeyay sanadka cusub.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay dardar xoog leh kooxda Tottenham ayaana u muuqatay mar kasta mida cududa weyn leh.
Daqiiqadii 27aad Gooooooooool! Harry Kane ayaa shabaqa soo taabtay kadib markii uu gool caawin ka helay Kieran Trippier.
Kooxda Tottenham ayaa sidaasi hogaanka ciyaarta ula wareegtay 0:1.
Daqiiqadii 33aad Gooooooooool! Mar Kale Harry Kane ayaa shabaqa soo taabtay waxaana isla markana goolka caawiye ka ahaa Isla Kieran Trippier oo goolkii horre caawiyay. Ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 2:0 ay Spurs hogaanka ku hayso.
Daqiiqadii 41aaad Goooooooooool! Spurs Maanta Lama Joojin Karo! Goolkii sadexaad iyo laad xor ah oo qurux badan ayuu Delle Ali markiisa shabqa Watford dhex dhigay. Ciyaarta waxay sidaasi ku noqotay 3:0 Watford lagu baashaalayo.
Waxaa sidaasi lagu kala baxay qeybtii.horre waxaana la aaday waadhka nasiinada.
La isku laabay duufaantuna hal dhinac kaliya ayay ka socotaa.
Daqiiqadii 46aad Gooooooooool! Alla Caawa maxaa Watford Haysta! Walter Mazzari hurdo uma taalo sanadka cusub. Markii sidaas loo soo galay waxaa mar kale shabqa Watford luxay Delle Ali kaasi oo caawin ka helay Harry Kane. Ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 4:0 Watford cirka loo diray.
Daqiiqadihii lagu daray ciyaarta ayay kooxda Watford gool caato ah iskaga reebtay ceebta gurigooda ku qabsatay waxaana goolkaasi u dagaalamay Younes Kaboul.
Ugu danbeyn hadal kuma wada sheegi karo wacdaraha ay Tottenham ka dhigtay Vicarage Road sidoo kalena karbaash uma laabna Watford iyo macallinkooda Walter Mazzari.
Martidu caawa si fcn ayay u seexan waxeyna ku baashaalayaan goolal afar ah oo ay si arxan darro ah ugu ciqaabeen Mazzari iyo xertiisa. Ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 4:0 ay kooxda Tottenham gudoonsatay guul buuran.
Filed in: Ingiriiska, Uncategorized, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino